"Abantu abayeke ukuganga ngocansi...lujulile" - Ladies House
“Abantu abayeke ukuganga ngocansi…lujulile”
June 28, 2020 Staff Writer
UKUZITIKA ngocansi noma nini nanoma nobani yinto esiyajwayeleka kulesi sikhathi samanje, okwenza nokuthi abesilisa nabesifazane kube lula kubna ukushintsha ophathina bocansi noma kanjani.
Kumnandi kunjalo, kodwa ongoti, kubalulekile ukuthi abantu bazi ukuthi ngokomthetho ucansi yinto ejulile njengoba uma ulala nomuntu, nishintshana ngoketshezi umzimba nomzimba.
Umjuluko, uketshezi locansi, iziqu zoboya imimoya yenu, konke kuyahlangana ngesikhathi nizitika ngocansi noma ngabe niyazidlalela nje.
Ungoti kwezocansi nobudlelwane, uDkt Vuyolwethu Madikane uthi kungalesi sizathu kufanele abantu bayicabangisise ‘eyokuganga’ ngocansi.
Uthe yingakho ngesinye isikhathi abantu besondelaniswa kakhulu ucansi uma kuke kwahambisana amagazi.
“Empilweni sinezinqumo ezihambisana nemiphumela. Ukuthatha isinqumo ngaphandle kokucabanga kuhamba nemiphumela nokuyinto efanayo nakwezobudlelwane. Ucansi luyinto ejulile, akuyona inyama kuphela ngoba umuntu olala naye uyasuleleka kuwena kube nokubizwa phecelezi nge’Spiritual Bond’ eyenzekayo,”kusho uDkt Madikane.
Eqhuba wenze isibonelo ngokuchitheka kwesisu kowesifazane, wathi kuyaye kudingeke agezwe ngokwesiko noma ngokwenkolo nebandla lakhe.
Kanjalo nokuya ocansini nomuntu omusha uthe kudinga uqale uzihlanze uzilungiselele ngokomoya nomzimba wakho ubusuhlukanisile phakathi kwakho nomuntu osudlule kuye.
“Ucansi aluzi lodwa nobumnandi kuhambisana nangomoya. Ngithe uma ngenza ucwaningo ngathola ukuthi abantu abaningi abazi futhi abacabangi baze bafike lapho. Ababheki ukuthi ukuhambe bezihlanganisa nabantu abahlukene ngocansi bazidalela izinkinga. Bgcina benezinkinga esinyama namamabhadi,”kusho uDkt Madikane.
Ephetha uthe noma ngabe umuntu akakwenzi njalo kodwa kungaba kuhle ukuhlaba ikhefu uma usanda kuhlukana nomuntu, ungajahi ukuyolala nomunye.
“Uma ukholwa uyathandaza, uma ukholelwa kokuthile, wenze ngendlela okholelwa kuyo, Kunabantu olala nabo akusulele ngomdlandla omubi.
Uma ulale nomuntu onomoya omuhle uzizwa ukahle. Akufanele sihlulele abantu kodwa wonke umuntu unesinqumo kumele abheke zinhlangothi zonke,”kusho uDkt Madikane.
← Home remedies to remove (ikiwi) dark patches between your inner thighs
Black Coffee Ex Wife Enhle Mbali Demands R4 Million for Devorce Legal Fees →
June 8, 2020 June 8, 2020 Staff Writer
KUYINTO ejwayelekile ukuthi uma abantu bezobopha ifindo likasofasilahlane bafune ukwenza indumezulu yomshado